Hacker တွေရဲ့ သွေးတိုးစမ်းခံလိုက်ရတဲ့ Despacito
On April 11, 2018 By fairy
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလေးကမှ YouTube ရဲ့ ကြည့်ရှုနှုန်းအများဆုံးအဖြစ် စံချိန်တင်ထားတဲ့ Despacito ဟာ မနေ့ညက ဟက်ကာတွေရဲ့ လက်ကမြင်းတာကိုခံလိုက်ရပြီး YouTube ကနေ delete လုပ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ (၁၀.၄.၂၀၁၈)
အီတလီဘာသာနဲ့ဆိုထားတဲ့ ဒီသီချင်းဟာဆိုရင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံး နေရာတကာမှာကြားနေရလောက်တဲ့ထိအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဆိုတော် Louis Fonsi နဲ့ Daddy Yankee တို့ဆိုထားတဲ့သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ စထွက်ကတည်းကနေ အကြည့်များခဲ့ကြပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလောက်မှာပဲ ကြည့်နှုန်း ငါးဘီလျံကျော်နဲ့ YouTube သမိုင်းမှာကြည့်နှုန်းအများဆုံးအဖြစ် မှတ်ကျောက်တင်ထားခဲ့တာပါ။ ဒုတိယနေရာမှာလိုက်နေတဲ့ “See You Again” တောင်မှ ကြည့်ရှုနှုန်း သုံးဘီလျံခွဲပဲရှိပါတယ်။
ဒီမနက်မှာတော့ (၁၁.၄.၂၀၁၈) delete လုပ်ထားခံရတဲ့ Despacito ကို YouTube ကပြန်တင်ပေးထားခဲ့ပြီး နဂိုတင်ခဲ့တဲ့ရက်စွဲနဲ့ ကြည့်နှုန်းအရေအတွက်တွေကို မပြောင်းလဲပဲ အရင်အတိုင်းပဲထားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို hack ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားပြီးမှ ဟုတ်မဟုတ်ဝင်စပ်စုခ့ကြတဲ့သူတွေကြောင့် သူ့ရဲ့ ကြည့်နှုန်းကပိုတောင်တက်သွားတယ်လို့ အက်မင့်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ video ရဲ့အောက်မှာလဲ ကွန်မန့် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေအများကြီးတက်နေပြီး အများစုကတော့ ဒီ hack ခံရတဲ့သတင်းကြားပြီးနောက် ဒါကြီးကိုလာကြည့်တာ ငါတစ်ယောက်တည်းလားဆိုပြီး မန့်နေကြပါတယ် ?
ဘယ်သူဘယ်ဝါလုပ်တယ်ဆိုတာ လက်သည်မပေါ်သေးသလို တခြား နာမည်ကြီး အဆိုတော်တွေဖြစ်တဲ့ Adele, Taylor Swift, Selena Gomez နဲ့ Bruno Mars တို့အပါအဝင် အနုပညာရှင်တော်တော်များများရဲ့ video တွေလဲ ဖျက်ခံရတဲ့ထဲပါကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဓိကကတော့ YouTube မှာရှိတဲ့ Vevo ကိုရည်ရွယ်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီး သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ video clip တွေမှာ မျက်နှာဖုံးနဲ့လက်နက်တွေကိုင်ထားတဲ့ လူတစ်စုပုံအပါ “Free Palestine” ဆိုတဲ့ သတိပေးချက်တွေကိုထည့်ရေးထားခဲ့ကြတာမို့ အကြမ်းဖက်သူတွေလုပ်ထားတာဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်လို့လဲ ထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။
Related News >> YouTube ကိုမကျေနပ်လို့ ဌာနချုပ်ထိသွားပြီး သေနတ်နဲ့ရမ်းကားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး
YouTube အတွက် ဒီလထဲမှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြဿနာဖြစ်တာဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ်ကတော့ California ဌာနချုပ်မှာ သေနတ်ပစ်သမားရဲ့ ရမ်းကားတာခံခဲ့ရတာပါ။ အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကို YouTube အနေနဲ့ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာမို့ မဆိုးလှဘူးလို့ အမှတ်ပေးမိပါတယ်။ ထပ်ပြီးတော့လဲ ပြဿနာတွေမကြုံရစေဖို့နဲ့ ဖြစ်လာခဲ့ရင်တောင် အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။
လူကြိုက်များတဲ့ Despacito ရဲ့ ခါတော်မှီ မြန်မာသင်္ကြန် version လေးကိုလက်ဆောင်အဖြစ် နားဆင်ခံစားလိုက်ပါဦးနော် ?
PREVIOUS POST Previous post: Cardi B ဆိုတာဘယ်သူလဲ??
NEXT POST Next post: `C-Festival 2018´ ပွဲအတွက် သံတမန်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ `MONSTA X´